Kazakhstan's FlyArystan waxay ku guuleysataa 91% waxqabad waqtigiisa ah sanadka 2020
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Kazakhstan's FlyArystan waxay ku guuleysataa 91% waxqabad waqtigiisa ah sanadka 2020
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kazakhstan • News • Waajib ah • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Sanadkii 2020, FlyArystan waxay duushay 9814 duulimaad oo siday 1.5 milyan oo rakaab ah, iyadoo 8930 ka mid ah duulimaadyadaas ay ku yimaadeen waqtigii loogu talagalay
FlyArystan, Diyaaradda Low Fare Airline ee Kazakhstan waxay duubtay natiijo kale oo xoog leh oo waqtiga kujirta (OTP) bishii Diseembar 2020, iyadoo 85% duulimaadyadu ay baxayaan waqtigii loogu talagalay. Dhamaan 2020 FlyArystan waxay gaareen 91% OTP.
“Sanadkii 2020, FlyArystan waxay duulisay 9814 duulimaad oo siday 1.5 milyan oo rakaab ah, iyadoo 8930 ka mid ah duulimaadyadaas ay ku yimaadeen waqtigii loogu talagalay, ”ayuu yiri Agaasimaha Hawlgallada Duulista, Kabtan Berdykhan Agmurov. Bilowgii duulimaadkii jiilaalka ayaa na horjoogsaday bishii Diseembar, iyadoo xaaladaha cimilada ee garoomada diyaaradaha qaarkood ay naga hor istaageen inaan duulno. Ma sameyno wax gunno ah oo gaar ah xaaladaha jiilaalka, iyadoo natiijada OTP-ga la gaarey Diseembar ay muujineyso xaaladihii adkaa ee soo food saaray xilliyadii duufaannada jiilaalka. Shirkadda oo dhan waxay dadaal weyn u gashay gaarsiinta adeeg lagu kalsoonaan karo macaamiisheenna. Kalsooni ayey ku dalban karaan iyagoo og in FlyArystan ay tahay diyaaradda waqtigeeda la joogo. ”
Heerka caalamiga ah ee OTP ee shirkadaha duulimaadyadu waa in 85% duulimaadyadu ay ku baxaan xilligooda. Xisaabinta OTP waa inay kujirtaa dhammaan dib udhacyada waana calaamad muujinaysa sida lagu kalsoonaan karo shirkad diyaaradeed markay fulinayso balanqaadkeeda waqtiga duulimaadku ambabixi doono. FlyArystan wax ka reeban ma leh cimilada xun, xakamaynta taraafikada hawada, dib u dhacyada alaab-qeybiyeyaasha ama arrimo kale.
Sida Loola Safro Covid-ka Cusub ee Omicron?